ပို့ဆောင်ရေးက Metro 1 ဝန်ကြီးဌာန Konya ဝယ်ယူပေးဖို့ဘီလီယံအကူအညီပေးခြင်းကိုပြောင်းရွှေ့ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး42 Konyaပေးဖို့န်ကြီးဌာနက Metro ယာဉ်ဝယ် Konya 1 ၏ဘီလီယံအကူအညီပေးခြင်းကိုပြောင်းရွှေ့
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုမက်ထရိုဓမ်မအမှုလွှဲပြောင်း Konya တစ်ဘီလျံခြံပေးသွားမှာပါ
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ugur အီဘရာဟင် Altai, ဒီလတင်ဒါမှ Konya အလည်အပတ်ခရီးအတွက်ကောင်းသောသတင်းပေးသော Konya မီထရို၏ပထမအဆင့်တွင်, ထိုညီလာခံအစည်းအဝေးန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် 2021 Konya အစ္စလာမ့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဂိမ်းများနှင့် beet စျေးနှုန်းကိုင်ပြီးအကြောင်းပြောပြသည်။
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်၏ဝယ်ယူမှု၏ Metro အုတ်မြစ်ဟာ Altai အဘိဓါန်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံရရှိနှင့် ပတ်သက်. ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖြင့်လုပ်သော protocol ကို "ဤ 1 ဘီလီယံကိုပေါင်တစ်ကိန်းဂဏန်းကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ မစ္စတာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဥက္ကဋ္ဌ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးများ, ဒီမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှု၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကနေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်အပ်နှင်းရှိသမျှကိုတာဝန်ဝတ္တရားပေးခဲ့teşkilatımızın။ ထိုအကိုလည်းနူးညံ့သို့ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးစားသုံးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအားကြောင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနများ၏အုပ်ချုပ်ရေးကသမ္မတ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယသမ္မတအပါအဝင်မြို့တော်အနေဖြင့်လက်ခံရရှိသောမက်ထရိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်မက်ထရိုကောင်းသောသတင်းနှစ်ခုစလုံးကျွန်မတို့ရဲ့ပြည်နယ်ကိုသမ္မတကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒါက Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တစ်ကွေ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank တနင်္ဂနွေလည်း Konya ASELSAN အလွန်သိသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် ", အ Altai အဘိဓါန် Konya အစီအစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အမှာစကားပြောကြားသည်။ အဆိုပါ 300 အတွက်တထောင်စတုရန်းမီတာအုတ်မြစ်ချခဲ့သည်, ဆောက်လုပ်ရေးနေဆဲဖြစ်သည်။ အာကာသကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1,5 သန်းစတုရန်းမီတာ သာ. ကွီးမွတျစီးတီးစည်ပင်သာယာပတ်လည်ပိုင်ဆိုင်မှုကျနော်တို့အမျိုးသားအိမ်ရာမှကိုကျော်လှည့်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ပူးတွဲစက်မှုဇုန်များ၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအရေအတွက်၏န်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိတော်ကိုယူပါ။ ထို့ကြောင့် Konya အတွက်အသစ်တခုအောင်မြင်မှုများ, အထူးသဖြင့်လက်နက်များနှင့်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများ, အနာဂတျမှာအသစ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ Konya ၏အလွန်လှပသောအနာဂတ်ပြင်ဆင်ထားရန်ဤအရာများကိုအားလုံး။ ကျနော်တို့မြို့၏နာမ၌အကျိုးရှိသောဖြစ်မျှော်လင့်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
"ကျနော်တို့ကတောင်မှ UP န်ဆောင်မှုကိုထုတ်ပြမယ်"
ပါလီမန်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှု bar ကိုပိုမိုမြင့်မားရာထူးသယ်ဆောင်ဖို့ AK ပါတီ Konya လက်ထောက် Zia Altunyaldiz မတ်လ 31 များ၏အစည်းအဝေးမြို့တော်ဝန်မှာမိန့်ခွန်းကိုဖန်ဆင်းကြောင့်ခရိုင်မြို့တော်ဝန်အခွင့်အာဏာကဆိုသည်။ Konya အမတ်များထဲမှာရှိသကဲ့သို့အဝေးထို့နောက် Konya ၏ခရိုင်နှင့် Konya အတွက်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းကိုပိုပြီးအရည်အချင်းပြည့်နှင့်အတူထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးနဲ့ပိုပြီးယှဉ်ပြိုင် Altunyaldiz အလုပ်လုပ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ညွှန်ပြ, ဒါဝေး Konya အတွက်ဝန်ဆောင်မှုရယူ သူတို့အများကြီးပိုမိုမြင့်မားဘားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးပမ်းအတွက်မြို့တော်ဝန်ကိုထောကျပံ့များဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, သူကပြောသည်။
Altunyaldiz မိန့်ခွန်းထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်၏အရေးပါမှုကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်: "အလွန်မြတ်သောထုတ်လုပ်တစ်ဦးသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်ရန်ရှိပါတယ်။ အသီးအနှံအနာဂတ်အတွက်လုံခြုံရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့မဖြစ်မနေမျိုးပွားဒါကြောင့်ပါပဲ။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သမျှကိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အတူတူကျနော်တို့ကဒီကဲ့သို့အလှတရားအောင်မြင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်အားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေပြုအမတ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်, ထိုခရိုင်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်အများစုမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးမှုး။ ကျနော်တို့ Konya အမြဲကူညီပံ့ပိုးရန်ရှိလွှတ်တော်အမတ်များသကဲ့သို့သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်သင်တို့ထံမှအသနားခံစာရှိသည် ဖြစ်. , ကျနော်တို့ကလူန်းကျင်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ဆက်လက်ရမယ်, ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှု concept ကိုအရင်အဦးနေရာအားဆက်လက်ရန်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးလူ့အဖွဲ့အစည်းထုတ်လုပ်လျှင်, ငါတို့သည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အထောက်အကူပြုနှင့်ငါတို့တိုင်းပြည်ရန် "အရပျစကားရပ်ကိုပေး၏ဆိုလိုတယ်ပါလိမ့်မယ်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆွေးနွေးနေတာအမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းခံရဖို့ Adana အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (Metro) 21 / 02 / 2012 ATO ဂေါပက "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းခံရဖို့အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (Metro), အကာအကွယ်ပေးရေးဇုန်နှင့် Adana အတွက်အတားအဆီးဆောက်လုပ်ရေး၏တောရိုင်းဖယ်ရှားရေးအဖြစ်မကြာမီထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းကြောင့်ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့အဖြစ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာတမြို့လုံး ကျနော်တို့ဒိုင်းနမစ်၏ညှိနှိုင်းသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ် "လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Adana ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ATO) ကိုညီလာခံBehiçPAKYÜREKနှင့်ဥက္ကဋ္ဌအလီ Gizer သမ္မတ, မြို့ရဲ့စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏န်ကြီးဌာနပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့တန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ကောင်းသော, "Light ကရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (Metro) ဖြစ်သော်လည်း၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှိပါတယ်ထွက်ညွှန်ပြ ထိုကဲ့သို့သော Adana အတွက်ဖြစ်ဖို့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဇုန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အတားအဆီးများ၏ဖယ်ရှားရေးအဖြစ် ...
Kadikoy-Kartal Metro ဘီလီယံအထိတစ်နှစ်ကယ်တင်မည် 1.1 19 / 08 / 2012 Kartal မက်ထရိုလိုင်း 29 မိနစ်လျှော့ချရန်KADIKÖYနှင့်အတူအကြားဖွင့်လှစ်။ အရာ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ပေါင် 3.1 22 1 တထောင်ကီလိုမီတာသို့မဟုတ်ပင် 266 လူဦးရေသန်းရက်ပေါင်းသွားလာကြလိမ့်မည် Wagon ဘီလီယံခန့်များတွင်ပါဝင်သည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်, "ဒီလိုင်းအတွက်တူရကီရန်, အစ္စတန်ဘူလ်မှဖြစ်ပါသည်, 1 နှစ်ပေါင်း 153 ဘီလီယံအထိငွေစုတဲ့သန်းပေါင်ရရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်သည် Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်းရထားလမ်းအပါအဝင်ကီလိုမီတာနှုန်းဟာ 3.1 22 ဘီလီယံစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်, Kadikoy ရင်ပြင်မှာကျင်းပမယ့်အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်။ ဒါကြောင့်အချိန်အတွက်ပထမဦးစွာဒီအမှတ်လိုင်းထဲမှာ ", ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးအလှူငွေရှိလိမ့်မယ်လို့ဖျောအာဒိုဂန်, Kadikoy-Kartal မီထရိုလိုင်းအဖြစ်တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူလ်, ...
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုသုံးပြီးဘောလုံးကိုထိရောက်စွာပို့ကုန်ပစ်မှတ်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ် 28 / 09 / 2013 ဘောလုံးကိုစီမံကိန်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးတက်ကြွသုံးပြီးပို့ကုန်ဦးတည်ရာကိုအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်: စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတူရကီကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ATO) ကသမ္မတ Salih Bezci, ဂရိတ် Anatolia ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (BALO) အဖြစ်ပြုလုပ် enabled စဉ်အကျိုးရှိစွာအသုံးမပြုတဲ့ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသုံးပြီးပို့ကုန်ဦးတည်ရာကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုစနစ်တခုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါနိဒါန်းအစည်းအဝေးကျောင်းကပွဲစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတူရကီကုန်သည်ကြီးများအသင်း (Aso) 1 ကျော်ရထားလမ်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှစတင်ခဲ့သည်။ ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ (OSB) ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ Bezci အစည်းအဝေးမှာ Speaking, ရှေ့ဆက်ထွက်တင်ဆောင်လာသော၏အားသာချက်ရှိသည့်ပြည်နယ်များအတွက်တစ်ဦးခြေလှမ်းတင်ပို့, ပို့ကုန်ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ sine qua မဟုတ်တဲ့အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူကဆိုသည်။ တူရကီရဲ့ပို့ကုန်အဏ္ဏဝါထုတ်ကုန်၏ 52 ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကို ...
တွေ့မှဘယ်မှာ Gebze Metro ဝန်ကြီးဌာနအဘို့အ5ဘီလီယံဘတ်ဂျက်? 27 / 08 / 2019 Kocaeli ဒုတိယဝန်ကြီးစက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် CHP ပါလီမန်ကော်မရှင် SözcüTahsin Tarhan ့, Gebze Metro တူရကီ၏ရန်းအမျိုးသားညီလာခံမှယာဉ်၏အပြောင်းအရွှေ့ဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးထံစာရေးအတွက်တောင်းဆိုချက်အပေါ်, အစီအစဉ် Tahsin Tarhan အောင်ကပြောသည်။ "ဒါဟာဒီဝန်ဆောင်မှုပေးပိုင်ခွင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနိုင်ငံသားတွေရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒီနေ့ရုံကျနော်တို့ကိုဒုက္ခရှိဟုမြေအောက်ရထားဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ကြည့်အသက်ရှင်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။ '' အမှုဆောငျလုပျငနျး5သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဘီလီယံခန့် BUDGET '' Tahsin Tarhan "Gebze အရာရှိများ5ဘီလီယံဘတ်ဂျက်မက်ထရိုကလည်း, ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်ကျနော်တို့က၎င်း၏ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်များအတွက်န်ကြီးဌာနမှကိုကျော်ဖွင့် ...
အဆိုပါ Ropeway စီမံကိန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းမှအလှူငှပေးပေးသွားမှာပါZonguldakı 04 / 03 / 2016 သငျသညျ, လူဟောင်းရဲ့တပ်မတော်ကြည်းတပ်ကျော်လက်ရှိ Zonguldak အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီ Outerwear ငုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်သောကေဘယ်လ်ကားစနစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ယနေ့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဗိသုကာတဦးတိုင်းရာသီ: Zonguldakıအဆိုပါ Ropeway စီမံကိန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းမှအလှူငှပေးပေးလိမ့်မည်။ ယင်းစီရင်စုများနှင့်စည်ပင်သာယာကြည်းတပ်, cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၌ပြစ်မှားမိအလှဆုံးအလုပ်, Zonguldak ၏အစီအစဉ်အတွက်ဆယ်စုနှစ်တစျဦး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း။ သို့သော်လည်းငါသည်အစဉ်အမြဲဇာတ်စင်ထင်ခဲ့သည်။ Muharram Akdemir ၏ Zonguldak မြို့တော်ဝန်မအနေအထားကိုစီမံကိန်းကို "ဟုအဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုတညျဆောကျပါလိမ့်မည်သလား" မပါဘူးသူက၎င်းတို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ မြို့တော်ဝန် Akdemir "ကျနော်တို့ cable ကိုကားတစ်စီးပေါ်မှာငါတို့ချစ်ခင်ရပါသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူအကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်သည်။ ချစ်ခင်ရပါသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ဤလေ့လာချက်များ၏ခြေလှမ်းများခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ကြည်းတပ် ilindeyk အဲဒီမှာသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူ ...
Konya, အက Metro ၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆွေးနွေးနေတာအမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းခံရဖို့ Adana အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (Metro)
Kadikoy-Kartal Metro ဘီလီယံအထိတစ်နှစ်ကယ်တင်မည် 1.1
တွေ့မှဘယ်မှာ Gebze Metro ဝန်ကြီးဌာနအဘို့အ5ဘီလီယံဘတ်ဂျက်?
အဆိုပါ Ropeway စီမံကိန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းမှအလှူငှပေးပေးသွားမှာပါZonguldakı
Kadikoy - Kartal Metro, ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ Anatolian ခြမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်
ဘာကူ-Tbilisi-Kars နှင့်မြောက်အဘိဓါန် South စီမံကိန်းများကိုယင်းဒေသ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုမည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (393) သြဂုတ်လ 2019 (506) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)